Mudane Shariif Maxamed oo loo doortay Guddoomiyaha Ururka SNU
Mogadishu Talaado 20 March 2012 SMC
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka dhacay doorasho lagu dooranayay Guddoomiyaha cusub ee Ururka SNU kaasi oo in muddo ah aanan laheyn guddoomiye rasmi ah. Munaasabaddii doorashada ayaa waxaa kasoo qeybgalay Golaha dhexe ee Ururka SNU, Odayaal dhaqameedyada Beelaha Banaadiriga iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee Bulshada taageersan SNU. Cumar Aweys Nuur (Dacas) oo ahaa Guddoomiyihii Guddiga farsamo ee doorashadani soo qaban qaabiyay ayaa waxa uu kasoo jeediyay kahor doorashada inta aysan dhicin khudbad, wuxuuna sheegay in ay horey u shaaciyeen qof waliba oo Banaadiri ah oo doonaya in ururka uu guddoomiye ka noqdo uu soo gudbiyo musharaxnimadiisa lakin aanu jirin cid u soo gudbisay marka laga reebo Xildhibaan Shariif Maxamed Sayid oo soo gudbiyay. Waxaa ka bilaabatay goobta oo aheyd Hotelka Shaamow in loo codeeyo Guddoomiyaha Xisbiga siyaasadeedka ay beelaha Banaadiriga leeyihiin ee SNU, waxaana laga codsaday in ciddii u ogol Shariif Maxamed Sayid in uu noqdo Guddoomiyaha SNU ay gacanta taagaan, waxaaba markii gacanta wada taagay guud ahaan Xubnaha golaha dhexe ee SNU, waxaana sidaasi ku guuleystay oo waliba aanan qarsoodi kujirin si gacan taag ah oo dadkuna ay arkayeen Shariif Maxamed Sayid. Guddiga Farsamada iyo xogheynta Doorashada ayaa ugu dambeyntii waxa ay kudhawaaqeen in Mudane Shariif Maxamed Sayid uu ku guuleystay in uu noqdo Guddoomiyaha Xisbiga SNU kuna helay cod aqlabiyad leh iyadoo aanu jirin intii kasoo qeybgashay doorasahda gaar ahaan Golaha dhexe ee SNU cid codkeeda ka reebatay Shariif Maxamed. Sidoo kale waxaa isla goobta lagu doortay Guddoomiye kuxigeenka koobaad in ay noqoto Drs.Fahmo Axmed Nuur, Guddoomiye kuxigeenka Labaad Caamir Axmed Maxamed (Jakeeti) Guddoomiye kuxigeenka saddexaad Maxamed Sheekh Cabdi, waxaana lagu doortay dhammaantooda cod aqlabiyad leh. Mas’uuliyiintii la doortay waxa ay kasoo wada jeediyeen khudbado kala duwan hayeeshee guddoomiyaha Cusub ee SNU ayaa ka sameeyay goobta lagu doortay ballan qaad fara badan isaga oo xusay in arrimaha siyaasadda dalka gaar ahaan dhinaca nabadeynta, masahariicda dib u dhiska iyo wax waliba oo wadanka horumar u keeni kara ay si buuxda uga qeyb qaadanayaan. Shariif Maxamed Sayid waxa uu horey xubin uga ahaa SNU isaga oo lasoo shaqeeyay Dr.Raajis iyo sidoo kale mas’uuliyiintii uga horeysay xilka Guddoonka SNU, wuxuuna ka codsaday Bulshada in ay lawada shaqeeyaan la’aantoodana aanu waxba la qaban Karin. Habka xorta ah iyo fagaaraha cad ee doorashada maanta ay ka dhacday ayaa waxaa si diiran u soo dhaweeyay qeybaha kala duwan ee Beelaha Banaadiriga waxaana loogu duceeyay Mudane Shariif Maxamed Sayid in uu xilka ilaaheey garabkiisa ku galo.